Soo dejisan 360 Total Security 8.8.0.1080 – Vessoft
Soo dejisan 360 Total Security
360 Total Security – software antivirus ah si ay u ilaaliyaan computer hanjabaadaha online iyo software xaasidnimo ah. 360 Total Security isticmaalaa matoorada antivirus awood badan si ay u bixiyaan ilaalinta nidaamka dhamaystiran in waqtiga dhabta ah. Software wuxuu taageeraa qaabab iskaanka kala duwan oo ka mid ah goobaha qaarkood nidaamka iyo meelaha ugu nugul ee drive ee adag. Sidoo kale software ka kooban yahay qaybta dheeraad ah la set oo ah qalab gaar ah si ay u nadiifiyaan tayadoodii nidaamka. Total Security 360 saamaxaaya in ay la files laga shakiyo iyo software gooni ah ka adeega kale ee nidaamka la isticmaalayo deegaanka dhisay-qodayaan dalwaddii shaqeeyaan. Software waxay bixisaa heer sare ah ilaalinta halka wax gubaya tirada ugu yar ee khayraadka nidaamka.
Heer Sare ah ilaalinta nidaamka
Isticmaalka matoorada antivirus awood badan
Hababka kala duwan iskaanka
Nadiifinta iyo ayna nidaamka
Taageerada jawi nabdoon qodayaan
Comments on 360 Total Security:
360 Total Security Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Comodo 8.2.0.4792 AntiVirus, Internet iyo Firewall
العربية, English, Français, Español... Adguard 6.1.258
العربية, English, Українська, Français... abgx360 1.0.6